Rwendo rwekutanga - Matthieu Grobli - Afrikhepri Fondation
Chitatu, march 3, 2021
Iyo Raft yeMedusa - Kupenda naThéodore Géricault
Inotsigirwa naA Afrikhepri Afrikhepri
Verenga: 54 min
Canga ave anenge mwedzi miviri ndanga ndichifamba nemasaisai egungwa, ndichidzungaira, ndisina kana tariro uye kuti mazuva ese, panguva imwecheteyo, ndakashanyirwa kubva kuzuva rakauya kuzondinyaradza, kudzamara manheru ekutambudzika kwangu. Kubva pawindo kabhini yangu, ndakaona mwedzi shimmering pamusoro yebhuruu pamusoro penyanza uye ndaiyemura, apo duku zvakasiyana makore kufamba usiku, ari hazvinzwisisiki pakadzika kokudenga apo tsamba somoto achiumba zvinyamutanhatu wairatidza arcana wekusingaperi.
Ndakazvirega ndichitungamirwa nemhepo uye nekukasira kwandaienda kunzvimbo isingazivikanwe uye ndakafamba nechikepe, nokudaro, pane gungwa rakakura rebhuruu, ndakakwezvwa nerwiyo rwechibhora reiridzi rwandiudza kuti ndiuye ...
Ndisingachazivi kuti ndaifamba kupi, ndakasvetuka semhepo, ndichifambiswa nedutu guru rezvido.
Ndakanzwa kunetseka nemafungu makuru akanditakura nekukurumidza uye achikurumidza sekuti vaizoenda neni kune zvandaida.
Kutungamirirwa nemafungu, ndaive netariro uye ndakatsunga kunyange kana iyi mamiriro ezvinhu asina kujairika akapa pfungwa yekutsvaga nenyuchi mune tsvina.
Pashure pemwedzi pasina pachena kubudirira, nguva dzose nechikepe regedzeka somupilgrim kuti chikepe chake, ndakatanga kusava nechokwadi uye mwoyo pamusoro zvaangaita uye mikana yokuona chinhu ichi kuchiva nenyika asi zvakaoma kuwana .
Saka ndakafunga kuisa imwe midziyo mumaoko angu uye ndakatanga kushevedzera nesimba rangu rose:
"Rudo uripi?", "Rudo uratidze wega?"
Asi ini ndaive nemanzwiro ekuparidzira mugwenga kakawanda mazwi ezwi rangu akadzoka kwandiri seamomerang.
Kuwira pamabvi angu, ndakasimudza maoko angu kudenga, ndichikumbira DNdinokumbira rubatsiro.
Panguva iyoyo, ndingadai ndakada matenga kuti azarure uye aburuke mugore, uyo anobatsira, iye oga anokwanisa kundivhenekera mune kutsvaga kusina kujeka.
Pakupedzisira, ndakanga ndisingazivi kuti rudo rwuri chii.
Chakanga chiri chinhu here?
Yakanga iri nzira yekuve ari?
Kwaive kunzwa here?
Zvose zvandaiziva ndezvokuti ndaivimba neRudo uye zvakange zvakakodzera kuti ndizviwane.
Asi ndaigona sei kutsvaga chimwe chinhu chandisingazive?
Ndakanga ndiine pfungwa shomanana yezvairehwa, asi hapana chaicho chaicho.
Anondiyeuchidza bedzi izvo zvandaive ndamboudzwa: "theAiye ane mwoyo murefu, kuti iye azere nokunaka, kuti anotoda zvinhu zvose, kuti anotenda zvose, kuti anotarisira zvinhu zvose, kuti anotakura zvinhu uye kuti haasakwaniki ", ndakava nemimba kune rumwe rutivi kana izvi Ahandina kumbofa, ndakava nemukana wokuswedera pedyo nayo, asi ini ndakazozivawo kusagadzikana kweAchii chakaita kuti ndiwire mumisodzi.
Ndakanga ndangoziva kutiAKuchema kwaiva kwose kwose uye mune zvose uye kwakanga kusina kukodzera kuitsvaga kuti iiwane kana kunyange kukumbira kuti ive nayo, asi yakanga yakakodzera kuti ibude uye inotora sezvo yakanga iri pedyo nesu.
Mushure mechinguva chiduku ichi chekufungidzira chainditakura kusvika pakuzara kukuru, ndakabuda panhandare yezvikepe zvangu, kuti ndinakidzwe neusiku husiku hwemazuva, uko kuchena kwemhepo kwakandifukidza nemashizha ayo esiriki. Ndakanga ndiripo, ndichinyatsoongorora kubwinya kwemaoko, maoko akayambuka uye akatarisana nemwedzi.
Pamberi pechikepe changu, ndaigona kuona ruvara rurefu rwemhutu rwakapera nokusingaperi.
takanga tisisanakidzwi ichi pakarepo dzikava mheremhere umo nemhepo gusts muridzo uye kurovanya mafungu pamusoro Hull kuti chikepe yangu rakazivisa kungangoitika dutu.
Inotungamirirwa nemhepo ine simba, zvikepe zvakanyura uye zvakasimudza kusvika pakasvika kwavakaenda kune zvigadzirwa zvemasiti.
Ndinodonha mukati mechipinda changu kuti ndione pane dashboard, nenyuchi ye anemometer panic.
Ndakaedza kuchengetedza rudder zvakasimba kuti ndirambe ndiri munzira kuenda kubhodibhobho, asi ndakaona kuti maitiro angu akanga asina maturo.
Pakanga pasina chikonzero mukuyedza kuchengetedza mudhiraivho: igwa rakanga richizununguka mumativi ese, richimutswa nemvura dzemheremhere dzegungwa.
Mune mamwe mamiriro ezvo Nkukanganisa kunoyeuka ukuru hwahwo kuvanhu.
Ipapo ndipo paanova nehutsinye.
Asi ini, mufambi asina njere, ndakanga ndisingakwanisi kubvumira chokwadi chekutongwa ne "gungwa" risinganzwisisiki.
Saka ndakaruramisa kapu yangu, uye ndine danho rakatsunga, ndakayambuka musuwo wekamuri.
Hazvina kumboita kuti ndiise mutsara wemhino kunze, mhepo yemhepo yakauya kuzomuputira chiso changu nechisimba chakadaro zvokuti magirazi angu akafamba.
Ndakaedza kuvabata navo asi ivo vakanga vatova kure, vakarasikirwa mumvura yegungwa.
Ndakabata pombi yangu nehope yangu, ndakafambira mberi, ndikadzika pasi, ndichienda kune mast yakanga yakabvumira kuiswa kwezvikepe mune tariro yekudzorera.
Asi, ndakanga ndisingagoni kuita zvakawanda, sezvo kukanganisa kwakakosha.
Ndakarwa nesimba rangu rose kurwisana nemvura ine hasha uye kuputika kwemhepo ine simba yakarova luff yechipfuva changu.
Ndakakurumidza kunetseka nekukura kwechamupupuriro yakanga yaiswa muhondo, iyo yose arsenal.
Zvose zvakanga zvaitika zvakakurumidza.
Makore akafuridzirwa nemvura akanga atanga kupinda mudenga rakaoma, uye kamwe-kamwe dutu racho rakaputika.
Kushungurudzwa kwegetsi kwakakonzerwa nekutinhira kwekutinhira kwakanga kwatenderera matenga kubva kumativi ose uye mvura inonaya yakawira pachikepe.
Kudengenyeka kwegungwa rakasununguka kusina kuputika mafungu makuru achiputika uye achidonha pahombodo yechipfuva changu uye kuputika kwakaguma kwaiva kuputika mafungu pachiso changu.
Chikepe changu, chakakandwa kumativi ose pamusoro pemafungu emusango egungwa rakanyanyisa, chakanga chisingaendere mberi ichienda kune ziso remhepo.
Ndakanga ndiri pasi pekutsamwa kwegungwa rakatsamwa rakaumba mafungu mashanu kusvika matanhatu mamita akakwirira kugadzirira kudzoka pachikepe changu uye kuchimedza nemafungu aro.
Mhepo yemupupuri yakanga yakura kwazvo uye dongo rakasvibirira kuti inotinyamurira mukati maro.
Ziso rekudutu rakanga risisipo kure uye kusangana kwakaita sekusingagoni.
Nenguva isipi, ndakabatwa nayo ndokubva ndabatanidzwa mu convolution yayo.
Pakupedzisira hondo yacho yakanga isina kukwana uye chikepe changu neni takakurumidzirwa mugomba risina chigadziko.
Chikepe changu chakakanganiswa chikavata zvino nzvimbo makumi maviri zvamaodzanyemba kwegungwa.
Asi chii chakaitika kwandiri?
Ndakatasva bhizinzi risingazivikanwi, ndaive ndakarara pamusoro pejecha rakanyorova, nyika yakazara nemakungwa maduku akaiswa muzvivako zvematombo apo rhythmic ballet ye ophiure nemarudzi ane variegated mavara akandikurudzira.
Zvadaro, ndakamira ipapo, ndichiyemura denga rekuzora iro rakamira pamusoro pemvura yakasviba yakawanda apo mafungu akagumburwa ndokuputika kuti avhare tsoka dzangu nehutu uye zviduku zviduku zvinoshamisa pedyo nemitezo yangu yakawanda.
Vose vakandipoteredza, ndakaona kumakuva emhuka dzinopfurikidza dzakashongedza jecha regoridhe remakungwa akanaka.
Ndakakurumidza kuziva kuti yaiva jellyfish uye kuti zvakanga zvakafanira kuti musazvibata kana ndisina kuda kuve nekupiswa nehuni uye kupisa.
Zvimwe zvaityisirwa nemamiriro ezvinhu aya akaipa, ndakaita sarudzo dzakachenjera kubva paimba nokukurumidza.
Kuenda kwandakanga ndisingazivi.
Pakuguma, ndakanga ndisingazivi kuti ndaive kupi.
Ndezvipi zvinotambudza kupfuura kuva wega, munzvimbo isingazivikanwi, pamaspodhi ehuse hunobudirira, pasina nheyo kana zvikwangwani?
Zvishoma nezvishoma, ini ndichatambanudza pamusoro pejecha, kunzwa manhengo angu uye kuudza utano hwangu.
Miraculously, ndakanga ndisina chinhu chokuputsa.
Ndakanga ndangova nemakumbo akaoma uye zvishoma.
Izvo zvaigoneka sei mushure mekuparara kwechikepe kwakadai?
Pashure penguva shomanana, ndakadzokazve kumira kwangu uye ndakagadzirira kufamba.
Ndakanga ndichiri kutsvaga maoasis umo mvura yakanga isingaomeswi, yehugaro hwekutevera mushure mekunge hurumende iyi, yechitsuwa chezvirimwa murenje iri, uye ichifamba pasi pekupisa, muviri wakaputirwa nekutuka uye miromo yakaoma, ndakatarisa uye ndakaona horizon isingachinji.
Miti yacho yakaita semafungu makuru uye gungwa raiva gungwa rechisuru.
Ini ndinozvibvumira kutakurwa nemafungu akaoma uye nemhepo inopisa, yakaoma, pasina kushorwa, sezvingaita mhepo ine simba inokwidzwa nesimba remhepo.
Ndakatamira pane imwe minda yemadhaimondi ine zvinhu zvakawanda zvakapenya uye zvinoratidza mazuva ezuva.
Pamusoro pechinhu ichi chinopenya chakanaka chaiva zuva-diski, iro rinotarisa rinotarisa sechirindiro pamusoro pezvose zviri pasi apa.
Muchikamu changu chekuona, ndaigona kuona, kuburikidza nemhepo yakawanda yejecha rakasvibisa munda wangu wekuona zvakajeka, chimiro ... uye ini ndakapinda mune izvozvi.
Mukufambira mberi kwangu, kuputika kwemhepo kunondirova nechisimba chakanyanya uye ndaifanira kudzivirira chiso changu nokuputira chigamba chemucheka wakakomberedza musoro wangu.
Sezvo ndave ndakatarisa uye ndakapofumadzwa, ndakafamba ndisinganyatsoziva kwandakanga ndaenda, ndinonzwa kurwadziwa kwakakonzerwa nehuwandu hwejecha jecha rakauya kuzotsvoda pamusoro penyama yangu.
Kwaipisa kupisa pamhenderekedzo iyi uye ziya rakawanda rakanga richifemereka kubva mumatope angu eshuwa uye nekukurumidza richisimuka paganda rangu rakatsvukiswa.
Ndakanga ndisina simba uye ndakanga ndisingakwanisi kunwa.
Ndaifanira kuvhara mumoyo mangu simba rinodiwa kuti ndirarame.
Nenguva isipi, ndakanzwa mumoyo mangu unhu hunopindirana hwakandifambisa mumunda wetariro ndokundipa simba rokufambira mberi:
Ndakakwira uye ndikadzika pasi mitsuwa yejecha sechikepe chakabviswa nekubhururuka kwechigumbu.
Hembe dzangu dzakabvaruka dzaive dzisiri chinhu kunze kwekuratidzira kwehupenyu hwangu husina kutsarukana uye ndakaisa tsoka dzangu imwe mushure meimwe pane ino inopisa nzvimbo, yakati rebei segudo rinodzungaira mumatope eSahara.
Ndisina kumira zvakasimba uye ushingi, ndakagumburwa kusvika pakupedzisira slouching, kutarisa pasi, ndisingazivi.
Pane imwe nguva gare gare, ndakadzika zvishoma nezvishoma maziso ...
Zvandakaratidzwa zvaive zvakajeka.
Ndakabvisa maziso angu nesimba uye ndakaona kuti jena re-orange-orange rinonyangarika panopera uye mwoyo wangu wakabatwa nehupenzi hwekunyunguduka uye hunoziva.
Kutungamirirwa nekunaka kwechitarisiko chakadaro, mazamu angu anosema achizara neRudo uye Mufaro ngaibudise kunze kwemisodzi shoma yakawira uye ichipararira sehova pamatama angu.
Kunze kwekufema, ndaifanira kukwikwidzana nechepamusoro pekukwanisa kwandakaona kune zvandakaona pakatarisa, iyo yakanga ichitanga kubuda uye iyo yakaita sedondo.
Chii chandingatarisana nacho munzvimbo yakadai?
Chitsuwa chacho chakagarwa nevanhu here?
Saka mibvunzo yakawanda yakasara panguva iyoyo isina kupindurwa sezvandakanga ndiri pamucheto wesango asi iyo yaizokurumidza kugara apo ini ndaizotapinda pakadzika kwayo.
Ichitungamirirwa nechido, ndakaenda kunzvimbo yepamusoro yaiva maiva mashomanana kubva kune imwe, uye iyo yandaigona kuona, yakasvibira nemafuta.
Raiva zvakanaka musango, hunodzorwa vashoma nehofori ine makumi matanhatu metres uye vane urefu, rakapetana, vakashumira amburera kunaya makwenzi gurusvusvu woodlice uye masvosve yakavanzwa pasi akafa kukoromoka mashizha.
Mukuderedza miti yakareba, nemimwe miti, yakasimba uye ine mavara mashizha uye yakarongedzwa, regai mazambiringa akaomeswa nemidzi yakasvibira pamusango uyu wemasango.
Sezvo ndaifamba nepakati pemwoyo wesango, ndainzwa mimhanzi inotapira yemakriketi uye shiri dzichiita mu symphony inobudirira katektoti yakaita seinoisa inzwi kuti ive nerunyararo usiku.
Ndisingakanganisi kutarisa denga kumhepo, ndakaona kuti ndakanga ndisina nguva shomanana isati yasvika uye ndakatora danho rokutanga kuti ndiwane nzvimbo yakachengeteka yokupedza usiku.
Asi munhu angatarisira sei kuchengeteka kana ari oga, akapoteredzwa nemhuka dzine nzara, nyoka dzine uturu uye dzimwe mhuka dzomusango?
Ndakatanga kutora mapazi kuti ndiite moto.
Kucheka, mukati mese peregrination yangu, ndoda matavi uye matavi akasvava, ndakaona, ndichivandira mubhurashi, nyoka hombe.
Izvozvo zvishoma nezvishoma zvakasimudza muviri wake wakareba, zvakanyongedza zvisikwa zvitsvuku uye maziso ake akadzikidzwa mumusoro wake ane simba akapfeka zviyero zvakajeka.
Nenguva dzose, ndakamutumira chibharo chakasimba kumusoro netsvimbo yandakanga ndangotora uye mhuka dzakasvibira dzakamhanyira mumasora makuru uye dzakanyangarika.
Mushure mekutora matanda akakwana, ndakaisa fagot munzvimbo yepamusoro uye ndakabata nguva shomanana yekufunga.
Chinhu chakareruka chakanga chave chaitwa, zvino ndaifanira kupisa moto nemugwagwa weArchaic wezvikamu zviviri zvehuni.
Imwe inoshandiswa sekutsigirwa yakaiswa pasi, asi yechipiri muchitsiko chechimiro chakanga chakaiswa mune slot rine mashoma mashizha akaomeswa.
Mushure mekunge kupesana kwenguva refu kwezvikamu zviviri zvehuni, utsi hwakapukunyuka pamatavi. Saka ndakanamatira pamusoro pekufukidzira mazamu okutanga uye murazvo wokutanga wakaonekwa.
Iyi ndiyo nzira yandingakwanise, kuburikidza nehutano hwemadzitateguru aya, kukudziridza moto wemoto uye unopisa zvishoma.
Ndakadziya kwenguva yakati rebei padyo nayo nekuti husiku hwakanga hwaunza nekubata kwechatsva, ipapo ndakasimuka kuti nditsvage chikafu chingagutsa chishuwo changu.
Ndakanga ndacherechedza munguva yandaifamba nayo, kuti denga rezasi rakanga rakazara nemhowe yemarudzi ose.
Ndakakohwa vamwe pasina chiratidzo chekuziva kwavo.
Ndakadzokera kunzvimbo yangu yekupisa kwandairega ndichitorwa moyo nemafirita ezvipembenene zvinoda mwenje, izvo zvinokwezva nekukwirirwa nemoto wehuni, kutenderera zvisina kuneta kwakakomberedza.
Ndigere kugadzika, ndakatevera ndichiyemura phosphorescent kushanduka kwemoto uye moto wechenje uyo wakabudisa chiedza chechiedza muusiku uhwu.
Ndakanyatsoona kufara kufungisisa uye kuteerera kutungamirirwa uku kwekufamba uye manzwi.
Nekunaka kwekuratidzwa, ndakakwanisa kukanganwa nzvimbo yakashata yandaive nayo.
Zvisinei, ndaiva, kamwe zvakare, akagura yangu nekuchinja mamiriro kana mhepo yakazara yemhangura maumi uye cumulus denga regai kuwira zhinji pamusoro bvudzi ndifare musango.
Mukupenya ndakazviwana ndanyorova kubva kumusoro kusvika kutsoka sekunge ndakange ndamwayiwa nemugomo wemvura: ndanga ndangoshamiswa nemvura zhinji.
Moto wangu wakabuda uye moto unopisa moto.
Ndakanga ndakatarisa kumatenga ndichisuwa, ndichikumbira rubatsiro rwekupiwa pandakanzwa izwi richizevezerana:
"Rara pasi urege kutya, iwe uchadedera pakutanga, asi iwe uchaona kushamisika kusingazikamwi kunowedzera mafungiro ako uye iwe"
Ipapo, denga rakanyarara uye mvura yakamira.
Moto, wakaoma kwazvo kuti uwane, wakanga wapera, uye zvino ndave ndichidedera nechando.
Avete nechigadziko vakava madhaka, I contorsionnai kwose kwose, nezano kurara, asi mwedzi chakarondedzera pamusoro Ebony muti hunde dzacho haunted pfungwa dzangu.
Kucherekedzwa neruzha rusinganzwisisike rwemazizi kurira, makiriketi achirira, mapuroti achichema uye tsoko dzichichema, handina kukwanisa kuvhara maziso angu.
Mabhuni akawira pasi mushure wangu, vhudzi rangu rakamira pamusoro mangu, mwoyo wangu wakarova nekukurumidza uye pfungwa dzangu dzakagadzirirwa zviratidzo zvezvikara zvinoparadza.
Zvose zvakandikomberedza, ndakaona murima rima, maziso akajeka emakungu akanditarira asingatyi uye ndakanzwa kubudisa huwandu hwemafu madota madzimai.
Kutya nechiitiko ichi chakaipa, ndaida kuchema asi ndaigona kushamisa muromo wangu, hapana inzwi rakabuda.
Saka ndaida kutiza asi maoko angu akanga akaoma rutivi nekutya.
Ndisingachazivi zvokuita, ndakatora matavi e fagot kuti ndirwisana nemweya isingagoni kuverengwa uye zvisikwa zvandaifungidzira zvakandipoteredza, asi my projectiles yaisagona kusvika kwavari.
Ndakava agoraphobic yenyika yakanga isiripo chaizvo.
Nenguva isipi, ndakabatwa nemapasimusi akandiita kuti ndidedere somunhu ane hosha.
Pakarepo kusuruvara kwangu kwakatanga, kufema kwangu kwakava kwakaoma uye ndakatanga kushushikana uye ruvara rwangu rwakave rwakajeka sekuti ndaizoenda kunobva pane kurwadziwa kunotyisa.
Ipapo kamwe kamwe, hapana. Zvakaipa zvakanga zvaenda sezvisinganzwisisiki sezvakanga zvaitika.
Musoro pakati pemabvi maviri, muviri wakafukidzwa nekutuka mushure mokunge uchinge waenda kumativi ose, ndakatanga kufunga, kuvhara pamusoro pangu, ndokudzosera kumamiriro ekuberekwa.
Zvakanga zvakashata kuva nemanzwiro ekukwezva pasina uye nekuzviwana uri mugomba risina chigadziko usina kukwanisa kuita, kuva munhu-chinangwa, chinhu icho rufu chinogona kushandisa sezvinofadza.
Ndakanzwa ndisina simba uye ndisingabatsiri.
Ndapera simba, ndakasungirirwa pamuti, ndakarangarira zuva rekurwadza kwoucheche hwangu, ndakapedza munyika, mumba mavabereki vangu.
Nguva imwe yandisingambofi ndakakanganwa ...
Party famba pedo neimba, ndakanga achifamba ari kunonoka kumhanya kuburikidza manyoro nenzvimbo iyo vanyatsobatanidzwa akadira siyana kasvisto rinoumbwa voikukkien, clovers, petunias uye ini inhaled anonhuwira mhepo akaomeswa pamwe kunhuwirira kwemaruva izvi akanaka.
In pekufa yangu mberi, ndakaona kuti maruva vakanga tilted munzira wangu kana kuti kukwazisa pamberi rangu uye mhashu, zvipembenene uye dzimwe zvipembenene mapapiro akabhururuka mumhepo sezvo hunoshamisa hwemoto.
Pamberi pangu pakanga pane chinhu chinoshamisa, chisingaoneki.
Ndichidya nzvimbo inoyevedza nemaziso angu, ndakashevedzera kuti: "Hupenyu, ndinokuda ..."
Pamusoro peiyo girafu yakasvibirira raiva zuva rakachenesa iro mairi aisvibiswa nemakore makuru emvura.
Nenguva isipi mhepo ine simba ine mhirizhonga, yakateverwa nekutinhira kunonzwa, yakaputsa mhepo yakanyanyisa yakatonga kumatenga, uye kudengenyeka kwemvura kwakawira pamipunguko iyo, iyo inotungamirirwa nehombodo, yakasimuka.
Ndakasarudza kunyarara pasi peimwe yemiti iyi kuti irege kunyorova nemvura.
Ndakadzika sechikwereti pasi pomuti, ndakatarisa kutarisa kwangu kumiti yepamiti, uko mavara mashizha, akafadzwa nemhepo yemhepo yakaita danho rinotyisa apo mashizha e-orange-machungwa akawa, matavi, mumvura yakadzikama yegungwa.
Ndichiri kumirira kuti mvura inonaya imire, ndakatevera madonhwe makuru emvura akafamba-famba kuburikidza nesimbi isina kuchena yejasi reLanceolate.
Me akazendamira pamusoro dzakasimba hunde, ndaiyemura uye vakateerera asingaverengeki matatya, agere pamahombekombe mudziva croaking akafanana kutenda denga nokuda kokuwanda rezvipembenene vakanga kuwira vaida muromo wavo.
Mvura yakawedzera uye ikawira parwizi rwakanga ruchiwedzera uye rwaityisidzira kuti ibve mahombekombe ayo.
Pakarepo, ndakaona kuti ndakanga ndiri munjodzi nekuti zvakange zvatsanangurirwa kwandiri kuti kumira pasi pemuti panguva yemabhanan'ana chinhu chaive nengozi zvakanyanya uye kuti zvaive zvakakosha kuti zvidzivirirwe.
Ndichibva kuInertia kusvika kumamita zana emamhanyi, ndakatsvaira pasi uswa hwakareba kurwizi.
Ndakakwanisa kubuda mumhepo uye ndakagara pabhangi kuti ndivezve nemanzwiro angu.
Nguva pfupi pandakanga ndaisa zvigaro zvangu pamvura yakanyorova, mudope, kupisa kwemheni kunotinhira kwakanzwika mudenga: mheni yakanga ichangobva kuwira uye yakarova pasi muti wakanga uri nzvimbo yangu yekuvanda.
"Kana ndikagara munzvimbo iyoyo, ndaingova nemamwe mashoma mashoma ..." Ndakafunga.
Ndakanga ndichizununguka uye ndichitaura kwete nokuti ndakanga ndine mvura kubva kumusoro kusvikira kune zvigunwe, asi nokuti ndakanga ndangova pedyo nekufa ...
Ndakaputika, ndakagara mumucheche, ndakatarisa nechepamusoro-soro nematai achidonha mukati metsanga uye mvura yemvura-maruva.
Nekushinga kwemauto, mukomana wemurume, uyo akanga auya mumhepo, akatanga kurondedzera mitsara huru, ndokubva awira pamusoro pemvura pedyo neshamwari yake, achifadza maruva ake nechando.
Pakuona ichi, ndakashamiswa nemufaro.
Mvura inonaya yakaenderera mberi ichiwira padombo, asi handina kumbozvinzwa zvakare.
Ndakanga ndichiri kunetseka, ndakashungurudzika nezvakanga zvangoitika, uye ndakagara, musoro wangu mumaoko angu, ndakatevera nekuyemura maziso, hove kushambira pakati pezvinyorwa zveguru uye zvebhuruu.
Zvadaro, ndakatambanudza ruoko rwangu muchikwereti mumvura inotenderera, ndakaedza kubata imwe.
Ndimwetuse pachiso changu, ndakabvisa ruoko rwangu kubva kumvura uye pandakavhura, ndakaona kuti yakanga ine dope chete.
Nekudaro, huwandu uhwu hwainge hwakazara nehupenyu: honye, ​​zvipembenene zvezvipembenene, leeches nemamwe akawanda macolculeti akavandira munzvimbo inoora.
Ndiine mweya unozvikudza, ndakabvisa dope iri kumahombekombe.
Ipapo ndakatsamira kuti ndigeze maoko angu sezvandakanga ndakamira pasi pebhangi ndikazviwana mumvura.
Ikoko, ndakadanidzira nesimba rangu rose nokuti ndakanga ndisingazivi kuti ndingashambira sei.
Ndichipinda mumvura yakanyarara yegungwa, ndaifunga kuti ndaizoenda kunonaya ini pandakanzwa ruoko rwakandibata nesimba.
Mumwe munhu asingazvizivi akarega kubva kumagetsi ekufa.
Yaiva baba vangu vakandiponesa ...
Kuyeuka kwechiitiko ichi chehupenyu hwangu chakaiswa mukati memoyo wangu mafashamo ekutsvaga.
Ndakademba nguva dzakanaka dzakapedzerwa nemhuri yangu, nguva dzomufaro, yekuseka, asiwo zvekushungurudzika, uye akafukidzirwa nekuzvidemba uku kwemwana, ini ndinozvirega ndichitakurwa mumaoko aMorpheus.
Mangwanani akatevera, ndakasimbiswa nekuimba mumhanzi yemhuka, uyo akaronga real concerto mukukudzwa kwangu.
Yakakanganiswa pamuti, puroti yemitambo inenge inenge marudzi ose emukorororo pamapapiro ayo yakatanga cacophony apo shiri dzakasiyana-siyana dzemarudzi ane mavara akaimba pamusoro pangu.
Mukubatanidzwa kwekufamba kwemakungu dzakasununguka kubva pabazi kuenda kunebazi.
Ateles nedzimwe mhando dzeeshe dzaive dzakaturika kubva pamiti, zvakadzika pasi, grimacing uye shrieking sezvavakandiona.
Ndakasimuka kubva pamubhedha wangu, ndakatambanudza kuti ndidzikise mathes uye kurwadziwa kweusiku hwakaoma, uye ndakatanga kufamba musango kutsvaga kutsvaga kutsva.
Ndakapinda pasi akanyorova muvhu pakavha, gurusvusvu woodlice, zvipembenene, slugs nezvipembenene yamarudzi ose, kana ndakaona pamberi pangu ndove beetles rakange akambochera munhu ndove bhora uye Vaiumburuka kunzvimbo yake muchibereko pamwe makumbo ayo hadzi somunhu sekasi Acrobat.
Ari munzira yake yaiva muti muduku-frog uyo ganda rake rakashanduka rinoratidza kurwisa kwemoyo wake.
Pakuswedera kwechiravha chitsvene, gomba duku rakazarura makumbo ake ndokukwira kure navo.
Zvichienderera mberi, ndakacherechedza mabhirikiti eti butterflies ne hummingbirds, avo, vakakweverwa nemaruva akajeka emaruva, vakawira pamusoro payo.
Bhirikiti pamaruva eEucalyptus zvakanyanya kunyanya kukurudzira kufunga kwangu nokunyenyeka kwayo mapapiro emapapiro emapapiro paaifambisa.
chitemamachira Izvi kuedza kusvina nezvishoma, pamwe yake hunde protractile, dakunanzva ichi ruva yakanaka pandakaona yakavigwa tangled dzakanzi munhu shrub, uchichinja yakarurama chromium iyo waenda ane doleful.
A master in the camouflage technique, chameleon yakaratidza kuti ndiyo yakanakisa nyama yakasikwa nokuti yakakwanisa kuwirirana nemamiriro ezvinhu akajeka kuburikidza nekuchinja marara.
Ini ndakanga ndisingadi kudanana kwakadai pamberi pangu.
Ndakamhanyira kumhuka kunobata kumativi ose.
Ndakanga ndichizvikudza pamusoro pezvandakanga ndaita.
Whistling nomufaro, ndakaramba vanofamba yangu, vari mamiriro hwemafaro, kana ndakaona, ndakamira makumbo dema, pane tarantula wakanaka cephalothorax uye sirivha nhengo akanga vakachera pasi dendere kugamuchira kwake mazai.
Tsananguro ine mitsvuku yegoridhe yakanyatsogadziriswa zvakanyanyisa uye yakarurama yekufamba, uku kuora mwoyo kwechichena chishande chishongo, chakanyatsogadzikana, chine chiedza uye chisina kuchena.
Ndakaikuta, ndikaikurumidza zvishoma.
Kufambira mberi mumarudzi ezvekushandara kwemasango kana michero yakasiyana-siyana yemuchero yakanga yakawanda, ndakawana michero iyi nokuti ndakanga ndava nemigumisiro ye hallucinogenic mushroom usiku hwakashure.
Usiku ihwohwo, ndakatambura kurwadziwa kwekutya uye ini ndakanga ndisingadi izvozvo zvakare.
Zvandakadya zvisingatauriki, ndaifanira kuwana nzvimbo pandingave ndakachengeteka kubva kune izvi zvose kuzvidya mwoyo.
Makiriketi anga achangotanga "rwiyo rwekuvira zuva" seyambiro yekusvika kwehusiku uye ndakamhanyisa mhanya.
Nenguva isipi ndakaona, makumbo mashomanana chete, mukova mudombo.
Yakanga yakaita sevanopinda mubako.
Ndakamira kwechinguvana pamberi pekuvhurika kwebako uye ndichitenderedza maziso angu mukutenda ndakati:
"Thanks Mwari wangu! "
Ikoko, yakarova nokufema kwemweya, ndakawira pamabvi angu ndokutanga munyengetero, ndakatarisa kune nzvimbo yakasvibiswa nekunyeka kweyeredzi dzakawanda.
Ndakanga ndangobva kuziva kuti Mwari akanga asina kumbondisiya uye aigara achinditarisira.
Ndingadai ndakakahadzika sei Rudo rwaMwari, ini uyo aigara ndiri mutendi zvakanyanya?
Panguva iyoyo, maziso angu ngaaite maruva echechrymal achimhanya pasi pamatama angu asina kumira. Zvino, ndichipukunyuka maziso angu mushure mekanza rwangu, ndakasimuka ndikayambuka mukova we cavern ...
Pandakapinda mumumvuri werima webako, gore remakonyeti-mhirizhonga rakabuda mubako kuti rinyangarika murima reusiku.
Ndakaneta nezuva rakaoma randakanga ndangobva kupfuura, ndakagara pasi pakatarisana nemadziro ebako.
Kwapera nguva shomanana ndakazorora pamusuo weimba iyi.
Zuva rakatevera, apo maziso angu akasvinudzwa, ndakanzwa kurwadziwa kwekuputika kwebhururu refreyfly rakange rabaya ganda rangu usiku.
Mamwe mazuva ezuva achipinda mukova wehavha akandibvumira kuti ndiparadzanise huni.
Ndakasimudza phlegmatically uye ndakafamba ndisina simba kunebazi raizondishumira sechiedza mukati mekufambira mberi kwangu pasi.
Ndakatarisa uye ndakatanga rwendo rurefu rwakaenda kumvura yakadzika yepasi.
Murazvo wandakaisa mhirizhonga mukudengenyeka kwangu ruoko wakaratidza chiedza chahwo chisina kujeka mune rima risingaperi.
Ndakashandisa gwagwa rakamanikana uye rinomhanyisa iro randakafamba naro.
Nguva nenguva, ndakamira kwechinguva kuti ndibate mweya wangu uye ndakaramba ndichipinda mukati mechipfuva.
Munzvimbo iyi yekuenda kugehena, ndakanzwa kutonhora kuchipinda mumuviri wangu mukati moutumbu uye mapapu angu kuomesa uye kupera semaruva akaomeswa.
Nenguva isipi, kufema kwangu kwakatanga kuwedzera.
Mhepo yakamanikidzwa uye inodzvinyirira yekugadzirwa uku yakatyisidzira kubvisa moto, uyo, unopera, wakarasikirwa nehanya nawo.
Ndaizove muri rima rose kana pakupedzisira, mushure mekufamba kwenguva refu mukati melabyrinths iri pasi pevhu nzvimbo yakawanda yakazarurirwa kumeso angu.
Mudumbu repasi makanga maumbwa macaltal concretion e stalagmites uye stalactites iyo yakaratidza hukuru hwewebhu dandemutande uye ini, ini ndakamiririra mhuka inosiririsa yakabatwa mukati mayo meshes.
Kuti ndibudirire kubva mumugwagwa uyu, ndakafamba pamadziro ehavha, ndichizarurira kwandiri zvakavanzika zvenguva yekare.
Pamadziro aya, ndakashamiswa nemifananidzo yakavezwa mumiririri wemisangano ye funerary uye mapoka ekuvhima.
Iyi hunyanzvi hweparietali, hwakanyorwa pamadziro edombo rebako kwakandipa kunzwa kunoshamisa kwekudzokera kumashure munguva
Ndakazviona ini, ndakashongedzwa nepfumo, ndakatarisana nemasodhoni ematani anopfuura mashanu, uye kushingaira, nemichina yakashandura, kusagadzikana kwezvinhu zvisingaoneki.
Kuzviziva ini neAustralopithecus, ndakanzwa kurwadziwa kwerufu kwakapararira zvishoma nezvishoma pamwe nemuviri wangu unorwara, zvichiita kuti mwoyo wangu uwedzere uye kukurova kwakanyanya kwemoyo wangu kwakandipa manzwiro anotyisa kuti aifamba, achibaya iyo firimu yakaonda yechipfuva yemuvukiropu yangu yenyama, kuti ndizvigadzire zvakashata.
Ndakabata, ndakabata ruoko rwangu rworuboshwe, ndichitya myocardial infarction, pandakaona kuvhara pakati pematombo, kureba kwemvura kwakapararira pamusoro pebako rehavha.
Pfungwa yekutevera nzira yake semakumbo ezvokudya akauya kamwe-kamwe kuti ajekese pfungwa dzangu uye ini ndakatwasuka kuti ndiedze kubuda kunze kwegomba iri pakutanga.
Kutevera mushure megungwa reepage, ndakasvika pane imwe nzvimbo iyo mvura yefurafura yakanga yawana muhombe chaiye sesimbi yakadururirwa mu cruc crucible.
Ikoko, yakaturikwa pamusoro pemusoro wangu, stalactite hombe yakatyisidzira kuwira pamusoro pangu, sebakatwa reDamocles.
Handikwanisi kuenda mberi uye ndaifanira kuita chisarudzo.
Ndakafunga nguva shomanana ...
Pakupedzisira, ndakatora kufema kwakadzika kuti ndizvinyenye mumvura yakachena yegungwa.
Ndakabhururuka pakati pematombo kweinenge kweminiti pandakaona mashoma masere kumusoro kwangu, chiedza chinopinda mumvura.
Ndakakurumidza kurohwa kwetsoka dzangu kusvika pakupedzisira kusvika kumusoro pamusoro pekuchema kukuru.
Kubva mukati mehupenyu hwenyika, ndakagara pamabhangi kuti ndibate mweya wangu, pakarepo, ndakanzwa kufungira.
Ndakatendeuka pakarepo munguva kuti ndione rima, fomu yemweya inomhanyira kwandiri.
Simba rakasimba rakandikomberedza, rakandidzora, uye ndakarohwa zvakanyanya zvokuti ndakarasika.
Pandakasvinudza maziso angu, chisingaoneki chakaonekwa pamberi pangu.
Ndakanga ndisati ndamboona zvidzidzo zvakadai sevanhu ava.
Zvakanga zvakasviba zvakanyanya, zvisingafukidzi kuputirwa nemakumbo, maziso avo akareba, akadzikatira akawira pasi pazviso zvavo, uye maziso avo akazara nemoto.
Kumira pamberi pomoto mukuru waiva muroyi wemasikirwo anotarisa.
Aive akapfeka nhumbi yake nhema nhema.
mhetekta yakaitwa yedehenya maheshers, apron yemifananidzo yakavezwa uye yakasununguka mapfupa, magic daggers pachiuno.
Akanditarisa nemeso kuti semiseve yakasviba yakandikanda miseve ine uturu kwandiri.
Mwoyo wangu wakavhunduka nekutya.
Achienderera mberi kwandiri, akashandisa gestural discharges nekuimba chinyorwa mumanzwi makuru.
Mufambo murefu wakatevera:
iyo nyanzvi, nemasimba ane masimba emashiripiti, yakaita sekutaurirana nemweya uye ini ndanzwisisa kuti nguva yangu yakazorora pamagumisiro emubvunzurudzo uyu neainotevera.
Mhepo yakaungudza uye yakadanidzira sokuti madhimoni aindikumbira kuti ndibayire kuti ndigadzirise kutsamwa kwavo.
Chiso changu chakatendeuka pandakaona gomba guru rinopfuta marasha.
Ko ini ndaive ndave kuzove kudya kweavo vanodya zvevanhu?
Wizard yakabudisa banga rake remashiripiti uye yakanyora maoko angu.
Kubva pane zviduku zviduku, mage yakaunganidzwa mune imwe ndiro imwe yeropa raakakurumidza kunwa.
Nenguva isipi, muroyi, mumhepo, akabatwa nokudengenyeka ndokutanga kuzvirongedza pakarepo.
Zvose kamwe-kamwe, akawira pasi, akarova.
Akamira pachinzvimbo icho kwekanguva, akabva asimudza musoro wake ndokutarira kwandiri.
Nechiito chisina kujeka akadana nyama kuti iiswe kwaari.
Akacheka nehope yeiyo huru yakachena uye akadira ropa rake panyika yakavhuvhuta yemusasa.
Izvi zvinogamuchirwa sechipo chakanaka chavanamwari sezvo mage achinyemwerera.
Akadzokera kwandiri akandobvunza zvikuru kuti ndinofanira kusunungurwa,
izvi zvakakurumidza kuurawa navaShaman vaviri vabatsiri, vakaderedzwa kuna tenzi mukuru muhurumende yehurumende.
Vasunungurwa zvisungo zvangu, isu mufudzikadzi pangu ropa rangu pakudurura uye kushandisa zviri blackish namatidza imwe mhando, ipapo akandiita kujoina vamwe worudzi akanga vakaunganira moto apo zvitendero mhemberero uchatorei magumo.
Usati kubika huku mupoto guru, nevashamani éviscéra jongwe uye anoita zvakare divining sayenzi norudo payo.
Panguva yechirongwa, hapana mazwi akabvumirwa kunze kweaya emukuru mukuru uyo ​​akatungamira pamusoro peatari
uye hapana munhu aive nekodzero yekuzvidza hutsvene hwemhemberero pakurwadziwa kwekutambura kutsiva kwakakomba kwechiitiko chekumhura:
nokuti akanga abva kubva pamutongi, akabva apiwa chibayiro.
Nemafaro hapana chimwe chezvizvi chakaitika.
Kune ini chikamu changu, tsika yacho yakaenda sekuronga:
Ndaifadzwa kudya iyi huku panzvimbo yekugadzirirwa semutambo uye ini ndakagadzirirwa kuruma kwose nekufara.
Pakuguma kwemhemberero yacho, ndakaendeswa kune imwe imba ndokubva ndasiyiwa ndiri ndoga.
Muusiku, ndakanzwa kunyunyuta, kuseka uye muparidzi wevanhu vemunharaunda asi ini handina kunzwisisa zvavaireva.
Achisiya panguva yangu zvokushamisira fungidziro, ndakafunga vakanga pamwe kushamisika apo ndaiva, nei ndakava Ngatitarise yakadaro uye chii vaizoita ini mazuva anouya.
Kushungurudzika kwangu kwehope, ndakashamisika nezveramangwana rangu.
Ndaizoona mhuri yangu zvekare here?
Ndingazodzoka rimwe zuva kubudiriro, iyo chaiyo yakandimanikidza kusiya vese vandaida ndichienda kune imwe nyika isingazivikanwe?
Ndakanga ndawana paradhiso iyi yepachivande kwandingave ndakasununguka kubva mumaketani evanhu vakabudirira asi nzvimbo iyi chete yakanga yatotanga uye ndaifanira kutarisana nezvido zvevanhu vakasiyana zvakasiyana.
Izvi mhuka pakutanga akapa pfungwa yokurarama ari zvekare gadziriro isingambokwanisi mitemo, asi ndakanga nokukurumidza nokusangana mitemo inokosha uye taboos kurudzi panguva mutengo kurasikirwa zvakare kuvimbika kwangu rusununguko.
Kubva kune chiedza chokutanga chemambakwedza zuva rakaputika nzvimbo yacho ine chiedza chegoridhe.
Ndakapiwa decoction nekunhuwa kunhuwa pamaronda uye ndakapiwa kunwa kwakaitwa kubva kumishonga yemishonga nemidzi.
Zvadaro mumwe mukadzi akanaka kwazvo ane minwe inoyevedzwa nekushanda uye unyoro wangu muviri wakaremara.
Ndakanga ndakafukidzirwa somudzimai wemashizha ane hutano hwakanaka hwatakagadzirira kusunga neianai liana.
Ndinoisa kumusana kwangu kwerinenge vhiki uye ose zuva, panguva imwe chete, ndaigona kuona nyoro siluetti yakaisvonaka chizvarwa richivezwa muchiedza pamukova uye ipapo uende mubhokisi.
Pakarepo pandakaona mumvuri wangu mweya wangu wose wakasvibiswa nekusingaperi.
Uyu mukadzi, uyo akataridzika kunze kwepanyika akandibvunza, akanga akanaka.
Chimiro chake chinonakidza chakamutsa mashungu angu ose apo ini ndamuona.
Neganda rake rine mavara, maziso ake ehazel, vhudzi rake refu refu uye kunyemwerera kwake kukuru, akanga akanaka kwazvo ... zvokuti ndakasarudza kumutumidza " Hwedu ”.
Mukadzi uyu akanga kutanga runako naMwari ose nguva imwe tsika: akapfugama parutivi metiresi yangu, iye zvishoma nezvishoma akamutsa musoro wangu kuti mundipe vatorwa potions nemishonga yemakwenzi nemidzi uye kuisa pamusoro kuchinja panenge pachirwadza angu.
Paakazopinda mukati mangu maziso akashungurudzika, bvudzi rake refu rakasvika kuti riparadze chiso changu seya caress yemhepo inopenya.
Akanditarisira sokunge ndakanga ndiri mumwe wehama dzake uye akaratidza kubatsirwa kwakanaka nokugara parutivi rwangu uye kuunza naye kubata kwekudziya kuburikidza nekuvapo kwake.
Ndakanga ndisingamuzivi iye zvino asi ndakarohwa nerudo rwaakaisa pamusoro pangu uye ini ndakamirira nguva idzi dzekutarisira nechishuvo chekushivirira.
Ndakatanga kutora kufanana nehana yangu ye convalescence, uye ndinoshuva kuti haina kumbopera.
Nekuti kana ndangoporeswa, chii chaizoitika kwandiri zvakare?
Ndakanga ndichiita zviri nani uye maronda angu akanga ava kuda kuparara, achingosiya zviduku zvishoma chete.
Rimwe zuva pandakanga ndakamirira kushanyirwa kwaHouri wangu, ndakaona kushungurudzika kwangu kukurukurwa kwemu shaman mukuru mumba.
Akapfekedza chikwata chake, akagara pasi-akarembera neni, ndokukanda mhou nemapfupa pasi, achigunun'una mazwi eupenzi.
Mupenzi akabvunza vakafa uye akakumbira madzitateguru kuti amubatsire nesarudzo.
Kuratidza pajecha risinganzwisidzani kusangana pakati pezviratidzo uye zviratidzo zvemifananidzo, akaronga zviratidzo zvandaifanira kubudirira.
kuitira kuti tive nekodzero yekubatanidza rudzi.
Iyo yekutanga tsika yakatsanangurwa zvakajeka nemasimba epamusoro anobatanidzwa.
Ndaifanira kubudirira zvinyorwa zvitatu,
miedzo yakandibvumira kuti ndipinde nepakati pezvikamu zvakasara zvevanotanga.
Iyi nzvimbo yaiva yevarume chete.
Izvi zvakatangira kuupenyu zvinomiririra kuchinja kubva paudiki kusvika kune munhu mukuru wekuzvipira kuzvimirira.
Varume chete ndivo vaiva nekodzero yekusununguka, asi vakadzi vaivimba nezvinhu zvenyama uye zvepfungwa pamusoro pevarume vavo.
Chiyero chekutanga chaisanganisira kutonga kwekutya uye kutya nepfungwa dzose iyo munhu ari kusurukirwa uye kunetseka kunogona kunzwa.
Ndakaenda kunofadza zvikuru kuwana iyi sango rakanaka uye ndinogara imomo kwemazuva matatu.
Chiyero chechipiri ndechokuti ndaigona kukunda mumwe wevarwi vakashinga vemhuri kuti vaedze ushingi hwangu nekushanda kwenyama.
Muchiedzwa chechitatu uye chekupedzisira, ndaifanira kuita basa rekugadzira nemaoko angu kuitira kuti ndiongorore unyanzvi hwangu hwekufunga uye unyanzvi uye ndibudise simba rangu rokusika.
Hapana akabvumidzwa kupindira mukutanga kwangu kuti andipe chero rubatsiro.
Uyezve, handina kuda rubatsiro nokuti kukanganisa kwehupenyu kwakandibvumira, munguva yakapfuura, kutarisana nemamiriro ezvinhu akafanana.
Nokudaro ndakanga ndawana imwe simba rezvepfungwa uye chimiro changu ini ndakakodzerwa neRama yakanakisisa uye ini ndakaropafadza kukunda matambudziko aya matatu.
Pachine mwedzi weusiku, ndinotsungirira ma saramente ekupedzisira mune wega musango dzvene.
Nokuti vanhu ava vanoita zvematendi vakatenda zvikuru mumweya yezvakasikwa uye vairemekedza zvikuru miti yavakabata nekuremekedza.
Iyi mhemberero yakaitwa nekereke yevamwe vatangi vekutanga vaitungamirirwa nemukana mukuru.
Musoro wangu waiveurwa, uye ndaigara ndichidzimwa kuti ndibvise shangu dzehupenyu hwangu hwekare uye ndishambidze muviri wangu.
Mushure mezvo, muroyi akandizodza nemashoko matsvene ndichipfekedza muviri wangu nechisimba chisingaiti.
Iyo rite yakaguma nechiratidzo che hieratic kubva kumagus makuru: kupfugama pamberi pake, akaita kuti nditore, pasi pekuremerwa kwakanyanya, mhiko yekunyarara uye kuvimbika, akabva andipfugama ndokundipa uta ne chena museve, phallus chiratidzo.
Saka, ndakakwazirwa nokuda kwekereke yose sehama uye sezveramangwana rinotanga.
Mangwanani-ngwanani, RMucheka waro mutsvuku wakabuda mukati maro uye kudzoka kwe moto iwoyo kwakaratidza kumuka kwevanhu vangu mune imwezve existential system.
Ndakanga ndava chiremera kuva nhengo yedzinza uye hupenyu hwose hutsva hwaizotanga kwandiri.
Zuva rakatevera ndakazova murume waHouri, uyo enchantress uyo akange achindinyengera nerudo rwake rwepfungwa munguva dzangu dzekushaya simba.
Mune mutambo mukuru uyu waipembererwa mukukudzwa kwangu ndakanga ndanyatsobvunzwa nekubatana kwakagadzikana kwevanhu vane ruzha rwiyo nemitambo yaive ichitanga pamberi pangu.
Pakutanga kwemhemberero, vatambi vakatevera zvinyoronyoro mumhanzi we rhythmic we tom-toms, ipapo rwiyo rwe crescendo rwakatungamirira kumitambo yeDionysian nemitemo.
Vakadzi ava vakazvipira zvachose kumutambo nekukwira zvishoma nezvishoma mahudyu avo, sokunge kuti dzimwe humwe hutsika hwekudenga dzakaratidzwa nemitumbi yavo.
Uku kubatana kwekufambisa uye simba zvakagadzirwa maererano nekuwirirana.
Vakatamba kutamba, maoko akatambanudzwa, zvishoma seSufi dervishes, vachitora simba risingaverengeki kumativi ose.
Pakunzwika kwematengerwa, vagari vomunharaunda vakarova maoko avo kuti vakurudzire vatambi vaidhonza miviri yavo kumutambo wemimhanzi.
Vakaita zviitiko izvi noukuru hunoshamisa uye vakandipa mukana wekunakidza kunoshamisa.
Iyi mitambo yakaratidza simba rekuziva uye maziso angu akadhakwa nemashizha avo.
Ndakashamiswa zvachose apo vakadzi vaviri vakagara parutivi rwangu vakatora maoko uye vakanditakura mune zvinyorwa zvisinganzwisisiki.
Zvadaro, mimhanzi yakakurumidza uye yakakurudzirwa kuti itange kufambisa. Nenguva isipi, pakureba kwekumhanya, madhiramu akamira uye munhu wose akamira.
Saka ndakazodzokera kunzvimbo yangu, pamwe chete nekupembera nekukwazisa kubva kumativi ose.
Pasina mubvunzo, pakanga pane mamiriro ekudyidzana nehukama hwakanga husati ndambosangana nawo.
Mweya wangu wose wakabatwa nemupupuriro weRudo nemufaro uye ini ndakamira ndisingatauri, ndakashamiswa nekunaka kwechiitiko ichi.
Gare gare, zuva rakati rava kugara mumutsara unofadza wemvura ine ruzivo, uye isu tose takaungana pamoto mukuru unopisa, taidya nemufaro kudya kwakanaka, tichiteerera tichida kumusoro wemusha kuti tiudze nyaya uye zvinyorwa zvenhema.
Nokudaro, nousiku hwakanaka, Ini naHouri takabatana zvakasimba muupenyu.
Ndakanga ndanyatsorohwa nemadzinza evanhu ava.
Zvechokwadi, chikwata ichi chakanga chisingazivikanwi chakazara nemhemberero dzemashiripiti.
Kutanga kwevarume, kuroora uye kuchema zvakapa tsika dzemitambo:
Kana nhengo yedzinza ikafa, mutambo wekurangarira wakarongeka ipapo panguva iyo kuchema kwakatanga kusimuka kwakaenderera mberi fortissimo pakati pehusiku uye kwakazodzikira zvishoma nezvishoma neyakareba mariro:
Vakashungurudzika, vamwe vakadzi vakaratidza kushushikana kwavo kuburikidza nekuputika mujecha uye nekudanidzira kunoshamisa.
Vamwe vakarova muviri kana kuti vakazvinyima vachichema uye vachidzokorora kurumbidzwa kwevakafa.
Pakarepo mushure mekufa, boka revahedheni raifanira kuremekedza ruremekedzo muviri wemufi kuitira kuti usagumbura mweya wake.
Mutumbi wake wakave wakagadzirwa nehuvhu hwakasanganiswa nemafuta uye akabatanidzwa zvokuti mweya unopukunyuka kubva mujeri revuvhope yake yepanyama kuti adzokere kuminda yekudenga.
Mushure mokunge, mutumbi wakavigwa muguva pamwe chete nezvinhu zvawo nokuti maonero aive kuti muviri wevanhu waiva nemweya mukuru usingafi uye wakaenderera mberi basa rawo mushure mekufa apo wakabviswa munyika ino .
Kutenda mune zvinyorwa zvakadzika midzi zvokuti kana nhengo yedzinza ichirwara, haana kunzwa kuti mamiriro ake ezvinhu ainge akonzerwa nehutano hwakakundikana.
Akazvitaura kune kutsamwa kweumwe wevanamwari vakawanda aifanira kutadza.
Pfungwa dzake dzaishushikana kuyeuka kana ainge asina kuzvidira nokuzvidira kana akazviputsa mumwe wemitemo yakawanda yechipupuriro uye aifanira kureurura pamberi pemukuru mukuru uyo, ane simba rake guru, ndiye oga aikwanisa kuti adzikinure pane zvakaipa zvake.
Nokudaro shaman guru yakachengetwa chete zvakavanzika zvemhemberero uye yakanga isingadi kuti izvivone kune vamwe pane kutanga kunyanya kusarudzwa nemuporese sevadzidzisi veiyiyi dzekuziva.
Tinoonga nekuda kwekuita uku, tsika nemadzitateguru ezvitendero zvevagari vemunyika idzi zvakapfuurirwa kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa kusvikira nhasi.
Ndakanga ndakanyanya kufadzwa nesangano rezera iri raive rakanyatsojeka uye rakarongeka.
Munhu wese aive nebasa rokuitira sangano, uye kana mumwe akazadzikisa basa romunhu, mumwe aifanira kuenda kune dzimwe mhemberero dzezvitendero.
Izvo mabasa akanangana akaparadzaniswa maererano nemamiriro emadzinza evanhu:
vakadzi nevana kune rumwe rutivi; varume veimwe.
Kubvira pamasikati ekutanga kwezuva, vakadzi vakashambidzwa pasi pecharaact, zvipfeko nemarwadzo makuru ekurova, vachiimba rwiyo rwekurudziro apo varume vakagadzirwa nemapfumo marefu akafirwa mumvura yakachena yegungwa.
Gare gare masikati, takaenda tichivhima, tichiwedzererwa nembwa dzedu Boubou naTito avo vakatibatsira mukubatwa kwemutambo.
Mumuti wekutinhira watakatakura pamashure medu taive nemiseve yedu yakafukidzwa nechepurare, iyo iyo yose yaive yakatarisira kuita.
Izvo zvakanga zvisina kudikanwa chete kuti tive netsika yekugunzanidza kuwirirana nemasikirwo seyechokwadi chameleon, asiwo kuratidzira kukura kwakanyanya kuitira kuti usapotsa mutorwa panguva yakakodzera.
Mushure mokuvhima kwezuva rakaoma, patakadzokera kumusasa nemutambo, madzimai edu avo vakanga vakamirira isu nekuzvidya mwoyo kushivirira zvakaputika nemufaro uye vakatiputira muzvombo zvavo.
Zvishoma nezvishoma, vana, avo vaitarisawo kudzoka kwedu, vaitamba antics mujecha remusasa.
Vakasvetuka nemufaro pavakaona tichidzoka kubva mukuvhima ndokumhanyira kuzotichingamidza nekudanidzira mazita edu.
Ipapo vakadzi vakapinda mubishi kubika muhari hombe dzvuku dzvuku.
Izvi zvakagadzirwa nemiti yakagadzirwa nemutambo wemutambo.
Ndakakoshesa unhu huripo hwevakadzi ava avo vakashandisa miti yakawanda yakasvibirira yekugadzira ndiro.
Ndaifarira gastronomi ino inonaka iyo yakashandura kudya kusina kunaka kweVesterners uye izvo zvandakatora kupfuura zvose ndezvokuti isu tose tinodya mune imwe mudziyo, kuitira kusimbisa zvisungo zvehama mukati rudzi.
Nguva pfupi mushure mokudya, takasvetuka, ini naHouri, tinopedza maawa akawanda tichishamba pasi pemakoronga erwizi.
Zvadaro takapinda muhukama hwemawindo akaoma emhenderekedzo yegungwa, akadzivirirwa kubva kumeso ekunyomba kwevamwe vedzinza avo vaifunga kuti nyaya yedu inonyadzisa.
Zvadaro, mushure mehusiku huchishandiswa pasi peredzi, patakanzwa meshva ekuputira ganda redu, takazorora zvakanyanya kunyanya kuparara mune zvakawanda zvezvifaro.
Neye, zvakapfuura hazvisati zviripo, remangwana rakanga risina basa, nguva chete yemazuva ano yakaverengwa.
Ndingadai ndaifarira nguva idzi kuti dzive dzakanyungudzwa nekusingaperi uye kuti hapana chinogona kuchinja Rudo.
Zvisinei, rimwe zuva, apo munhu wose ainge adzokera kumusha uye zuva rainyangarika pakatarisana, ndakatarisa, kumira pasi pamhenderekedzo yegungwa, kuputika kwakaputika pamahombekombe uye kuvhara gungwa uye ndakaputirwa rukova rwekutsvaga.
Ndakanga ndisingatauri pamusana pejecha rakatsvaira uye ndakaona nzvimbo yakatarisa iyo, yakaroverwa nemagumo ekupedzisira ezuva rakagadzika, yakatora chikamu che-yellow-orange.
Sezvo nzvimbo inoyevedza yakapera pamberi pemaziso angu akashamisika, ndakateerera kurwiyo rwegungwa rwakaita kunge masairini akaita seachandisheedza achindiudza kuti ndiuye, ndikanzwa mafungu airovera achirovera pamatombo. Tungamira.
Ndaifara nekubatanidzwa kwemashoko aya uye mimhanzi inonakidza yakaguma uye ndakanga ndichivhara zvishoma nezvishoma maziso, kuseka kwekuzara.
Kutarisa kwekunyanyisa, ndakafunga nezvemhuri yangu kuti ndakanga ndasara ndisina mashoko uye ndakazoziva kusingaperi kwechimiro chekureva umbilical chakandibatanidza nemidzi yangu.
Ndakaona kuti kuenda kune vabereki vangu kwakandibvumira kuti ndive neruzivo rweRudo rwandakavaitira.
Ndakanzwa ikozvino kushayikwa muhupenyu hwangu uye nzvimbo inokosha yavakaita muupenyu hwangu.
Manzwiro angu ndeokuti hupenyu hahukodzeri kurarama pasina munyu weRudo uye kufara kwemashoko.
Ndaifanira kutaura, taura nemumwe munhu uye ndizarure mwoyo wangu.
Asi pano, ndakanzwa sokuti ndiri ndoga munyika.
Pakarepo, semhinduro yekutambudzika kwangu, ruoko rwakauya kuzogara papfudzi rangu: aive Houri uyo, ave kunetseka nezvekusavapo kwangu, akauya kuzonditora.
Akanamatira zvakasimba paruoko rwangu uye takadzokera kumusasa.
Ari munzira, akandiudza kuti ainzwisisa uye kuti aizoremekedza chisarudzo changu dai aizodzokera kunyika yangu.
Aiziva kuverenga pfungwa dzangu.
Akaratidzika serene uye zen mukati memaonero ake ose, asi ndakanzwa zvakasimba kuti mwoyo wake wakakuvadzwa nekuchema.
Haana kuchema nokuti aiziva kuti zvaizoitika zuva rimwe chete, aive akagadzikana mupfungwa kuti zvive nyore kupatsanurwa.
Akandiudza kuti akanga akagadzirira kutarisana nekuenda kwangu uye kuti haizomubatsiri zvakanyanya, saka, akasvika pedo nemusha, iye akabvumira kubva muruoko rwangu, akakurumidza kufamba uye akakurumidza kupinda mumugwagwa wakamanikana , chimiro chayo chekudenga chinonyangarika pamucheto.
Ndakanga ndasiya mararamiro kwenguva refu.
Makore matatu ato ...
Mazuva churu nemakumi mapfumbamwe nemashanu munyika ino, kure nehunyanzvi hwese, masystem emari nesainzi, kwandakanga ndadzidza kuteerera miti, maruva neshiri, nekuti ivo vanotaura nesu:
vanouya kuzotitaurira isu, patinoteerera shoko ravo, kuti paradhiso haisi iyo yehupenyu hwehupenyu husati hwafa asi huripo mune zvimwe zvinhu zvepakutanga zvezvisikwa.
Ndakanga ndapedza nguva yakawanda ndichitsvaka rudo, kuchengeteka, kugutsikana ...
Asi ndakanga ndadzidza panguva iyi rwendo kuti mufaro wakanga usingabviri mukati maro, nyore, nokuti nzira chete yekuwana nayo ndeyokupa kune vamwe pasina kugunun'una, pasina kusaneta uye pasina kuzvidemba.
Mangwanani akatevera, mushure mekunge usiku hurefu hwekufungidzira, ndakaudza rudzi rwechido changu chekubva pachitsuwa chacho.
Ndakagamuchira mhuri yakanaka kubva kumukuru mukuru uyo ​​akanga achipikisana nekuti ndinoda kubva kumudzimai wangu, Houri.
Asi, zvisinei, akanditendera akabvumirana ne remonstrance.
Paiva nemhemberero yekuyeuka mukuremekedzwa kwangu uye zuva rakatevera, pakutanga kwezuva, wizard yekare yakaraira kuti tive nemiti yemiti yekugadzira chikepe chiduku.
Kwapera vhiki, rudzi rwose rwaiva pamahombekombe.
Vamwe vakandipa chimwe chinhu chokufananidzira sokuratidza manzwiro avo eshamwari kwandiri.
Shaman guru, uyo anoshamisa uye ane taciturn, akandishamisika paakarega mazwi mashomanana kubva mumuromo make.
Akataura mazwi aya kwandiri:
"Chiedza chekuziva chiri mauri kana iwe uchinzwisisa kuti kutsvaga kwekusazivikanwa uye yako nyota yezvisingataurike zvinopera."
Akabva azondipa ruoko rwake rwakashata uye akandipa rimwe remakumbo ake aizondidzivirira parwendo rwangu rwose.
Nguva inorwadza zvikuru yakauya apo Houri akaswedera kuchikepe.
Paaifambira mberi, maziso ake akaratidza kutambudzika kwake kwose.
Achibata miromo yangu, akandipa kutsvoda kutsva ndokubva aenda.
Ipapo kunyarara kukuru kwakabata mhepo yose.
Saka achinyatsotaurira ichi rakanyarara, Ndakapedza maziso imwe nguva yokupedzisira chitsuwa ichi paradhiso, pasina shoko, pasina zvokurambana yakanakisisa panoraama mufananidzo uyu diki, vachiti kuti yaiva shiri kana kuti chaiva muti, asi kutora nyika iyi yose, ikandisiya ndisina kukwana zvachose nekuzara kwayo.
Pakupedzisira, mushure mekunge nguva ino yekufungisisa zvakasimba, ndakatanga kusimbiswa nemanzwiro emufaro akavhenganiswa nekurwadza, kutendeukira shure kwangu pachinhu ichi chakanakisa munyika ye totems uye taboos.
Ichi chiitiko chakaratidza kuva rwendo rukuru rwekutanga rwekusunungurwa kwemweya wangu, uyo akamboshongedzerwa nenyaya, akapinda munzvimbo dzepamusoro dzekuziva nhasi.
Nokudaro, ndakasunungurwa kubva pakutambudzika kwangu kwekutya, kusava nechokwadi kwangu, kunetseka kwangu kwezuro neramangwana, kurarama chete pamusoro pezuva ranhasi, hupenyu hwangu hwave segungwa risingaoneki pasina mafungu kana mafungu.
Mushure mokunge ndakadzingiswa nemhepo sehuta hunoshungurudzika pamusana pekusaziva kwevanhu, ndakange ndava kuziva chokwadi chikuru uye ndakanzwisisa basa rangu.
Zvadaro, sezvo zuva risina kupera pakatarisana, ndakasimuka ndakatarisa kunzvimbo isina chokwadi, ndichisiya nzira yakawanda yakapararira mushure mechikepe changu, ndichiona panguva imwe chete ndodzima perfect world ...
Kureurura kwechikepe kwakakanganiswa
Ndaigara ndichifamba pamusoro pemafungu egungwa guru, iyo, nerubatsiro rwayo, yakarinda pamusoro pemapapiro ayo uye yakandinyevera nezvengozi dzezuva nezuva.
Zvinonzwisisika, kwetezve mhirizhonga, hakuna dutu rinoparadza, hakunazve dutu guru rinondiyeuchidza nezveve existential mhirizhonga, panzvimbo yepaccid uye serene gungwa, pasina kunyanya kudarika kana kuputika kunoputika.
Kudavira kuti Maraître aigara achinditambudza marwadzo ake uye kutambudzwa akanga atendeuka uye akanga asarudza kuratidza magnanimity kwandiri.
Ndazviona ndisingabatsiri, angadai akashandura tsitsi dzangu.
Ndinotya kufungidzira kuti kuburikidza nekunyengeterera kweminyengetero yehama dzangu, ndakawana nyasha dzaMwari.
Bullshit uye zvisina maturo!
Vamwari nevamwari havafananidzi iwo mafungiro evabereki vedu akagadziriswa uye akaiswa mukati medu kusaziva?
Zvese izvi chaizvo hazvigone kuve neicho chaicho, chinangwa chinangwa!
Anokuvadzwa nekunyepedzera kwedu uye fungidziro, hupenyu hausi kungova chiroto chekumuka, kurota uko isu, ivo protagonists, tinongopinda tichitarisa zvisina basa?
Zviito zvedu hazvisi zvekungoedza kuedza kubuda mune ino yakaipa hope?
Tiri chimwe chinhu kunze kwechibereko chemamirioni emakore emakore kuti madzitateguru edu, madzitateguru edu, vabereki vedu vakatisiira zvakateedzana uye isu tinofungidzira kukosha kwayo?
Kuziva kuti kuchinjaniswa kweOrder nemhirizhonga inzira isingaperi yemasikirini apo zvinoitika zvezviitiko zvinoshanduka mumabwe ejecha easinga gadzikike, ndakasvika pakufunga kuti kupesana kwepakati nepakati nekukasira kwakaumba musana wehupenyu hwangu.
Saka, Ndini chigadzirwa nguva stochastic zviitiko oupenyu hwangu murwi sezvo silt kuuya apo Nile mafashamo kuzomisa murwi pekusava uchimirira kuti anotevedzana akaturikidzana mufaro uye kutambura kuti vane akaiswa muhupenyu hwangu.
Ndinenge kunwa anwe pamusoro kudhaka pakati ephemeral mufaro uye zvechokwadi acharavira kuvava kutambura, asi pasina chirwere ichi yangu pamuviri hwekurarama kwedu uye kunyange kana dzimwe nguva upenyu hwakafanana rakadzikadzika apo mhosva mweya vanodzungaira pasina tariro, umo shrill kuchema kwevanotambudzika aone kuorera mazviri nyama, apo-geda mazino kurangwa anoreva zvakafanana, dzimwe nguva chete kutarisa chigadziko buda kuona chiratidzo kudzikinura yemumhino mabviro tariro iyo ichandibvumira kuti ndirambe ndisingaori uye ndisingatsinhirwe pasinei nekusava nenguva.
Kuyambuka pamusoro pemakungwa makuru
Mushure mokunge ndarashika mune zvimwe zviripo, ndinozodzoka kuti ndibvunze pamusoro pemamiriro angu ezvinhu iye zvino uye nzira dzandakafanira kupona nayo panjodzi iyi inotyisa.
Ndaigara ndiri muchibvumirano chekudengenyeka kwemhepo kunondishungurudza zvisingaverengeki, semashanga uye chikepe changu chakanga chichitinhira kumahombekombe egungwa.
Mavhiki mashomanana akapfuura uye achiripo nyika isati yaonekwa.
Zvangu zvekudya nemvura uye zvekudya zvakange zvanyanyisa uye ndaifanira kuenda kunobata hove yangu yezuva nezuva.
Ndaiziva kuti chinhu chinonyanya kukosha chakanga chisingazobudi mvura yakachena uye ini ndainwa zvishoma chete sips.
Kudzvinyirira kupisa kwezuva, mhepo ine mchere yemvura yakashongedzwa, kusakosha kwezvokudya kwakaita kuti ndive asina kusimba uye ndisingafariri.
Mitsipa yangu yakava isina simba, mhepo yangu yakadzika yakavharwa ...
Ndaifunga kuti ndaizofa nenzara.
Mumuviri wangu inert, mutambi wekusaziva wenyaya yake, muoni wezviitiko zvisina kusimba zvemamiriro ekuzvidzidzisa, akatarisa, seshiri-mweya inomuka muether, kuziva kwangu kwakapukunyuka kupfuura munda nzvimbo-yenguva yekumbundira kusaguma kwenguva iripo.
Iko panguva iyoyo ndakava donho remvura mugungwa guru, tsanga yejecha shoma mugwenga guru, muti uri nyore musango guru.
Nguva yakanga kukosha kwandiri, kutambura hapana zvazvinoreva uye zuva nezuva ndapinda Acrobatic kutamba pamusoro Dolphins kuti manta mwaranzi kutamba, magadzirirwo awo zvikoro rehove pamunhu kudanana shure pegungwa uye nemasiraidhi akapendwa kutamba neapo hove huru pasinei juggernaut ivo raimiririra, vaifamba pamwe stupendous mukana wokushandiswa uye nounyanzvi mune rakaisvonaka zvokunwa guru.
Sezvo rima rakazadza mavharuvhu ehupenyu hwangu zvakanyanya, ndakagashira semana inodonha kubva mudenga, nyasha dzisingatarisirwi dzekugadzirira: hove dzinobhururuka dzakamhara muchikepe changu kunge tambo yekumhara yakagadzirirwa izvi chinangwa.
Zvadaro, mangwanani akatevera mutambo wangu patafura yeOlympian Gods, ndakasimbiswa pakutanga kwezuva, nemagetsi anonzwa matsi ehove yehove yakanga iri kufamba mumvura yakapoteredza.
Nokudaro, ndakakwanisa kuburikidza nekuyambuka uku kwakaropafadzwa mumakungwa makuru, kudzokera kumiganhu yenyika uye kuwana nyika dzekuzvarwa.
Apo patakaswedera kumbabvu uye maziso ekupedzisira ezuva rakasviba akaita sokuti yainge yanyangarika, ndakaona kufara kunofadza kwekuyeuka kwekuyeuka uye kubwinya kwekufara kwekuonana zvakare.
Kubvira panguva yekutanga, ndakaninipiswa nekunzwa kusuruvara, kunhuwira kunhu hwemhepo yenyika yangu yakasanganiswa nekunhuhwirira kwakanaka kwemaruva ezhizha.
Zvadaro, kuuya pedyo chengarava, vakwasvi vakashinga pamwe Pavaikurukura nguva dzose nedutu akaunza zvinofamba acoustic ikabatwa akauya apo rangu remutauro uye kuzunguza tsandanyama sezvinoita zvinozipa kutsvoda yangu eardrum membrane.
Kuwana nyika yangu, shamwari dzangu, zvinhu zvangu, zvakaita kuti ndidzoke kune mufaro mukuru, asi kufamba kwangu kunonakidza kwakachinja kuva manzwiro anonyadzisira.
Pandakangosvika pasi, ndakacherechedza kuti zvinhu zvose zvakanga zvashanduka uye hapana chakanga chakafanana nechekurangarira kwechirangaridzo changu.
Guta racho raive richitungamirirwa neHerculean, vanhu vakanga vachinjawo.
Zvinhu zvose zvakanga zvashanduka uye zvakange zvisingatauri kupera nguva.
Zvakaipa dutu sezvo ndichiiparadza tsunami inoparadza sezvinoita kudengenyeka, nguva yakanga kwakakanganisa pamadziro dzimba akacherwa zviso, vachiuya nazvo, kuchembera, kukwegura uye vapera basa zvinhu.
Kunze kwemiganhu yenyika yangu, ndakanga ndakanganwa kuti hupenyu hunoitakura nayo musimboti wekupermanence.
Zvose zvakanga zvachinja.
Kunyangwe manzwiro, pfungwa, maitiro aive akasiyana nehunoonekwa hunoyeuka mupfungwa dzangu.
Munzvimbo enyika, vanhu ndakasangana vakanga saka kunetseka uye mwoyo, dzarasika murazvo nzeve vakafamba vakaita chiite marobhoti uye dzakachinja tsika dzavo nokuita kwavo kufanana nevechiduku ezuva nezuva.
Ini dzimwe nguva ndainzwa mahumanoid aya achindirwisa nehunhu hunosungirwa vachiti "wakadii hako?"
Sezvo kana mamiriro angu evanhu aifarira ivo zvishoma.
Izvo zvinogadziriswa, mitsara yakagadzirirwa, marongerwo, maitiro, zvose izvo zvinogadzirisa izvo zvinoderedza murume wekunaka kwake uye izvo zvakavhiringidza utano hwake hwehutano.
Dzimwe pandaiva kufamba remashiripiti nechivimbo uye chinhu chakaipa kwazvo, ndakasangana munhu ane mwoyo wakanga nomuti negodo, ndakanga akavanda seri dikes unyengeri, neziso kushandura achitsetsenura avo akanyarara aitaurisa .
Dzimwe nguva zvinowanzoitika kuti kupisa kwechando kwekushingaira kwevamwe kwakange kune zvese zvinoratidza hunyoro hunosuruvarisa, uye kuti izvo zvisinganzwisisiki zvakanga zvakafanana neupfu hwakakandwa mumaziso evakakosha.
Zvadaro, chimerical yavo yakandifukidza zvikuru pamapapiro emaserafi paaibata mumumvuri rurimi rwavo rwakakonzera ruvara rwemashoko akadai eruvengo.
Ndakaona kuti kunyengera kwechokwadi kwezvinhu kunonyengedza isu kusvikira zuva iro rakasvibiswa nechiedza chechokwadi, tinouya kugamuchira chimiro chezvinhu.
Nokudaro maonero akazara emufananidzo wechinyorwa wehupenyu anobvambura izvo zvakavanzika zvehupenyu kuti zvivhenekere ruvara rwemafu rwekusaziva kwedu.
Zvakanditora kuti ndiende kune dzimwe nzvimbo kuti ndione kuti hupenyu hunongova kufamba, kuti zviito zvedu zvinongotipa mhosva kune yekutanga nyonganiso nyika uye kuti hupenyu hwedu inhandare huru yehondo yatiri kurwira kumira kwekupedzisira kurwisa kwakapararira kusagadzikana ...
Tarisa Invictus (2009)
Marcus Garvey: Baba vekubatana kwevanhu vemuAfrica